Antigua neBarbuda Citizenship yeAntigua Harbour Island Residence Mugove
Antigua neBarbuda Citizenship neAntigua Harbour Island Residences
Kuwana kwemugove wehotera kuwana Antigua neBarbuda Citizenship
Kutizira kwako kuimba yeCaribbean!
Mumusha unofadza weJolly Harbour, iyo kadhi kadhi inoratidzira edu emazuva ano, akashongedzwa zvine hungwaru uye akashongedzerwa zvakakwana dzimba mbiri dzekurara dzinozvipa. Dzimba dzedu dzimba dzinopa panoramic maonero emvura uye inoyevedza yakasvibira nzvimbo yakasvibirira yemakomo akapoterera. Misha yedu yekuvakira ndiyo yakanaka yekudzokera uye nesarudzo huru kumhuri, kupera kwevhiki, vafambisi vehusiku, vafambi vega kana shamwari.
Nyeredzi shanu dzekugamuchira vaeni
Iko kunyaradzwa kwevaenzi vedu kwakakosha zvakanyanya kwatiri, saka iyo nguva yaunopinda muHarbour Island Residences iwe unonzwa wakadzikama uye wakasununguka. Hapana chinhu chakawandisa kwatiri.
Maminiti mashanu FAMBA UENDE KUMABHUKU
Mumaminetsi mashanu chete famba iwe unokwanisa kuwana imwe yemazana matatu nemazana matatu emahombekombe pachitsuwa ... hongu, isu tine mazana matatu nemakumi mashanu emabhishi. Zvakare munzvimbo yeJolly Harbor ndiyo yakanaka, isina kuongororwa 5 km yeJolly Beach.
5 NYOTA ZVOKUDZIDZA ZVIRI PEDYO
Nzvimbo dzakasiyana siyana dzemahombekombe egungwa, dzakajairika uye dzakanaka maresitorendi kwaunogona kunakidzwa necocktail yako yaunofarira panguva yekufara uye kunyura kwezuva pachitsuwa.